Microsoft yekuvaka Java yave kuwanikwa kune wese munhu | Kubva kuLinux
Microsoft yekuvaka Java yave kuwanikwa kune wese munhu
Darkcrizt | 28/05/2021 16:47 | Noticias
Microsoft yatanga kugovera yayo yega Java kugovera zvichibva paOpenJDK, ichipa yemahara yakavhurwa sosi Java yekuparadzira iyo inogona kukwikwidza neOracle's Java kugoverwa. Chigadzirwa Inogoverwa mahara uye inowanikwa mukodhi yekodhi pasi peGPLv2 rezinesi.
Binaries Microsoft Kuvaka kweOpenJDK inogona kunge iine zvigadziriso uye kugadzirisa izvo zvinoonekwa sezvakakosha kune vashandisi vemukati nevatengi, asi zvisina kuiswa mune yakakwira OpenJDK chirongwa. Izvi zvinogadzirisa uye kugadzirisa zvichaonekwa mune zvinyorwa zvekuburitsa nekodhi yekodhi inowanikwa.
Sechiyeuchidzo, Oracle mu2019 yakaendesa ayo Java SE mabhanari kugoverwa kune chibvumirano chitsva cherezinesi. , que inorambidza kushandiswa kwekutengesa uye inobvumira kushandiswa kwemahara chete mukuvandudza kwesoftware kana kushandisa pachako, kuyedza, prototyping, uye kuratidzira kwekushandisa. Zvekushandisa zvebhizimusi pasina muripo, zvinokurudzirwa kushandisa yemahara OpenJDK package yakapihwa marezenisi pasi peGPLv2 neGNU ClassPath kunze iyo inobvumidza inosimba kubatanidza pamwe nekutengesa zvigadzirwa.
Bazi reOpenJDK 11, iro rinoshandiswa mukugovera kweMicrosoft, rinotorwa semhando dzeLTS, idzo dzinogadziridzwa kusvika muna Gumiguru 2024. OpenJDK 11 inochengetwa neRed Hat Company.
Inofanira kuonekwa kuti Kugoverwa kweOpenJDK kwakaburitswa neMicrosoft ndiko kupihwa kwekambani kune Java ecosystem uye kuyedza kusimbisa kudyidzana nenharaunda. Kugovera kwacho kwakagadzwa sekugadzikana uye kwatove kushandiswa nezvakawanda zvigadzirwa zveMicrosoft nemasevhisi, kusanganisira Azure, Minecraft, SQL Server, Visual Studio Code, uye LinkedIn.
Izvo zvinotaurwa kuti Microsoft Kuvaka kweOpenJDK ichave neyakareba yekuchengetedza kutenderera nekota kuburitswa kwemahara ekuvandudza. Izvo zvinosanganisirawo zvigadziriso uye zvinowedzeredzwa izvo, nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe, zvisina kugamuchirwa muOpenJDK mainstream, asi zvinozivikanwa sekukosha kune vatengi veMicrosoft nemapurojekiti. Idzi shanduko dzekuwedzera dzinozojekeswa zvakajeka mumanotsi ekuburitsa uye dzakaburitswa mukodhi yekodhi mune reprojekiti repo
Nhasi tiri kufara kuzivisa kuwanikwa kwese kweMicrosoft Kuvaka kweOpenJDK, nyowani isina-mutengo kugoverwa kweOpenJDK iyo yakavhurwa sosi uye inowanikwa mahara kune chero munhu kuendesa chero Sezvatakambotaura pakutanga patakazivisa Microsoft Kuvaka Ongororo yeOpenJDK, Microsoft yakanyanya Java yakasimba ine anopfuura 500.000 maJVM anomhanya mukati. Iyo Java Injiniya Boka inodada nekupa kuiyo ecosystem yeJava uye kubatsira masimba emagetsi seLinkedIn, Minecraft, uye Azure.
Microsoft akazivisawo kuti akapinda muEclipse Adoptium Working Group, iyo inoonekwa seyevatengesi-yakazvimiririra chikuva chekuparadzira OpenJDK mabhanari ayo anoenderana zvizere neJava maratidziro, anosangana neAQAvit yemhando yepamusoro, uye akagadzirira zvigadzirwa zvekugadzira.
Zvekuteedzera kwakazara kuteedzera, magungano akagoverwa kuburikidza neAdoptium anosimbiswa kupokana neJava SE TCK (chibvumirano pakati peOracle neEclipse Foundation chinoshandiswa kuwana iyo Tekinoroji Inoenderana Kit).
Iye zvino, OpenJDK inovaka 8, 11, uye 16 kubva kuEclipse Temurin chirongwa (yaimbove iyo Java yekuparadzira AdoptOpenJDK) inoparadzirwa zvakananga kuburikidza neAdoptium. Iyo Adoptium chirongwa chinosanganisirawo IBM-inogadzirwa JDK magungano akavakirwa paOpenJ9 Java chaiyo muchina, asi magungano aya anoparadzaniswa zvakasiyana kuburikidza neiyo IBM saiti.
Kugoverwa kunosanganisira zvinogoneka zveJava 11 neJava 16, zvichibva paOpenJDK 11.0.11 uye OpenJDK 16.0.1. Kuvaka kwakagadzirira yeLinux, Windows uye macOS uye inowanika pakuvakwa kwe x86_64. Pamusoro pezvo, bvunzo inovakwa yakavakirwa paOpenJDK 16.0.1 yakagadzirirwa masystem eARM, ayo anowanikwa kuLinux neWindows.
Pamusoro peichi chiripo kuwanikwa, Microsoft zvakare zvinopa Microsoft Vakai yeOpenJDK Docker mifananidzo uye zvinoenderana Docker mafaera. Izvi zvakagadzirirwa kushandiswa nechero application yeJava kana chinhu chekushandisa cheJava chekuendesa kwese kupi, kusanganisira Microsoft Azure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Microsoft yekuvaka Java yave kuwanikwa kune wese munhu
LibreOffice 7.2 alpha kuyedza kwatanga
ONLYOFFICE Docs 6.3 inouya nerutsigiro rwezvinyorwa uye nezvimwe